Warbixin:Shan wadan oo waa weyn oo ku guuldareysatay inay u soo baxaan Koobka Aduunka 2018
Thursday, January 24th, 2019 - 10:22:22
Friday November 17, 2017 - 01:25:05 in Wararka by
Xulka Italy ayaa seegaya Koobka Adduunka 2018 , shaki kuma jiro, in ay aad uga xanuusanayaan dhibaatada ah ka heritaanka koobka aduunka 2018,markii ugu danbeesay oo dhacdadaan oo kale ku dhacdo waxa ay ahayd sanaddii 1958-
Hada,waxa ay ku baxayn gacmaha xulka Swedan labadii kulan oo ay wada ciyaareen isku dar waxaa 1-0 ku badiyay qaranka Swedan.
Hase yeeshee guul darradu waxay noqon kartaa mid ay ku ilaawaan in ay yihiin xul afar jeer ku guuleestay koobka aduunka.
Italy sababta ugu weyn ee tartanka uga hartay,waxaa lagu qeexay in ay tahay in ayna xulka heyssan ciyaaryahano waayo arag ah iyo tababare qibrad xoogan u leh xulka.
Xulka inta badan kama ayna ka soo muuqan xulkii Italy ee gaaray fiinalka Euro 2012, laakiin waxaa la arkay wax la yaab leh, taas oo sheegaysa wax badan oo ku saabsan xaaladda haatan ee kubada cagta Talyaaniga.
Talyaanigu xitaa ma aysan sameynin hormar balaaran dhanka wareega group-yada Koobkii Adduunka ee ugu dambeeyay, oo aan dhameystirin hal guul, tan iyo markii uu koobkii aduunka 2010 markaas oo ay ku dhameesteen kaalinta 3aad ,ayagoo ka danbeeyay Costa Rica iyo Uruguay 2014.
Dhab ahaantii waa dhacdo naxdin leh oo ku aadan Talyaaniga inay ka maqanaadaan Koobka Adduunka 2018, lakiin waan hubnaa inay ku soo laaban doonaan mustaqbal wanaagsan Gianluigi Donnarumma, waxa uu durba uu helay booskii uu baneeyay Gianluigi Buffon , waxaana jira ciyaartoy tayo leh oo ka ciyaari kara khadka dhexe iyo weerarka.
Talyaanigu waxa uu sameeyay hormar balaaran marka loo eego dhanka kale seddexdii ciyaarood ee ugu dambeysay ee U21 European Championships, halka U19 ay ku guuleysteen sannadkii 2016. Waxa ay ku guuleysteen barbarihii Koobka Adduunka ee xagaagaan. dhamaan waxaa ka soo baxay ciyaaryahno muhiim ah oo afar sano ka dib Italy ku soo celi kara saaxada kubada cagta aduunka.
Holland ayaa seegtay tartankii labaad ee isku xiga. Waxay ku guuldareysteen inay u soo baxaan EURO 2016 iyagoo kaalinta 4aad ku dhameysta groupkooda. Czech Republic, Iceland, iyo Turkey ayaa ku dhameysatay kaalinta koowaad iyagoo aan helin fursad ay kaga soo kabsadaan taariikh xumadii ku dhacday xulka Orang.
Holand waa ay seegi doonaan sidoo kale koobka aduunka Russia 2018, Netherlands ayaa hormar balaaran ayee sameesay labadii koob aduun ee ugu danbeesay 2010,waxa ay gaareen Final halka 2014 ay ku dhameesteen kaalinta sedaxaad.
Qofna ma qeexi karo halka uu dhibka ka haysto Holand,balse waxaa la isku wada raacay in Holand ay haysatto dhibka ah in inta ugu badan xulka laga soo xulo gudah horyaalka Holand oo xiligaan ahayn mid xoogan.
Qarankan ayaa lagu qasbay inuu wali ku tiirsanaado Arjen Robben, Wesley Sneijder, Klaas-Jan Huntelaar iyo Robin van Persie, kuwaas oo dhamaantood ku dhow dhammaadka xirfadahooda waxayna fursad buuxda ama kalsooni heli waayay Jiilasha soo socda sababtoo ah ma aysan awoodin in ay la wareegaan hogaanka xulka, iyada oo aan wax tayo badan wali u soo bixin sidaas darteet wali waa xul ku tiirsan ciyaaryahano ku dhow in ay siibaan kabaha ay ku ciyaaraan kubada cagta.
Horumarinta ciyaartoyda da’da yar ee Nederland waa mid caalami ah, laakiin weli kuma guuleysan kooxahooda dhalinyarada. U21s ayaa markii ugu dambeysay ku guuleysatay tartankii European Championship.
10 sano ka hor ayee ahayd markii ugu danbeesay mana aysan soo xaadirin afar kamid ah shantii kulan ee ugu dambeysay.
U19 ayaa taariikh sameeyay sidoo kale sanadkan, lakiin waxa ay si joogta ah u seegeen tartanka kama dambaysta ah uu ciyaaryahan walbo jecelyahay in uu ciyaaro.
Cameroon ayaa ah xulka ugu imaanshaha badan Afrika ee Koobka Adduunka xulka ku loo yaqaano libaaxyada Africa toddobo jeer ayee ka soo qayb galeen Koobka Adduunka, in ka badan Nigeria. 1990, waxaa hogaaminayey halyeey Roger Milla, waxay noqdeen kooxdii ugu horeysay ee Afrika ah ee u soo baxda wareega 8da ee koobka aduunka.
Guushaan badan ayaa u muuqatay inay ka mid tahay wadama sanadkaan ka qayb galaayo koobka aduunka ka dib markii Cameroon ay ku guulaysatay koobka African Cup of 5 bishii Febraayo, laakiin waxyaabihii ka danbeeyay ma nooqn kuwa guuleestay. Waxay badiyeen shan ka mid ah 13kii kulan ee ka dambeeyay koobka qaramada Afrika oo ay finalka ku garaaceen xulka Masar, kaliya hal ka mid ah ayaa ka soo muuqday wareega ugu danbeeya ee isreebreebka Koobka Adduunka.
Nidaamka ay u qaybisay FIFA AFrica waa mid naxariis daran sababtoo ah . Mar walba waxaa jiri doona dhowr kooxood oo wanaagsan oo ka maqnaan doona ciyaaraha Koobka Adduunka iyadoo kaliya shan kooxood oo ku guuleysta wareegashanta Garuub ay ka qayb galayaan koobka aduunkaNigeria ayaa ka guuleysatay ,halka Cameroon iyadoo Zambia ay kaalinta labaad ku dhameysatay. Algeria, oo gaartay wareega 16ka Koobka Adduunka ee 2014, ayaa ku dhameysatay kaalinta hoose ayadana kama mid ahan wadama ka qayb galaayo koobka aduunka 2018.
Haatan waxa ay aheyd dhowr sano tan iyo markii Samuel Eto’o uu u soo ciyaaray Cameroon, laakiin weli waxa ay heystaan shaqsiyaad badan oo hibo leh, islamarkaana ay ku guuleysteen koobkii African Cup of Nations, ka dibna waxay sidoo kale awooddaan inay u ciyaaraan sida koox xooggan
. Si kastaba ha ahaatee, jiilka cusub waa inuu sugaa dhowr sanadood si uu u helo tikidhka Koobka Adduunka 2022.
ka hor inta uusan ciyaaraha ka fariisanLionel MessiArgentina ayaa soo qaadan lahayn sababtoo ah asiga la aantiisa wa ay seegi lahaayeen koobka aduunka hadii uuna xulka ku soo laaban lahayn waxa ay soo xasuusan lahaayeen 1970 oo ahayd markii ugu danbeesay oo ay seegaan koobka aduunka.
Sheekada Chile ayaa ayadana ah mid cusub si weyn ayee uga dhex muuqdeen koobkii koofurta America ayaga ayaa ku guuleestay sidoo kale,waxa ay ku guuleesteen koobkii loo dhigay sanad guuradii 100-aad ee ka soo wareegtay markii la aas aasay koobka ay ku tartamaaan wadama koofurta america.
Dhanka kaleXiddiga Barcelona ayaalugtiisa ku soo saaray xulkiisawaxaana uu dhaliyay seddexleey kulankii ay 3-1 kaga badiyeen Ecuador. Ma aysan ka guuleysan tan iyo 2001dii. Saddexda dhibcood waxa ay heleen ciyaarta oo ay Argentina ku garaacday kaalinta 6aad ilaa seddexaad sidaas oo keentay guuldarada ah in ay Chile ka soo qayb galin koobka aduunka 2018.
Chile ayaa labada dhinacfursad heestay,balse Argentina ayaa ka soobaxday wareega group-yada, waxaana ay ku dhaceen kaalinta 6aad ee kala sareynta Koobka Adduunka. wadamada koofurta America , ka dib markii ay ku guuleysteen labada Copa America.
Alexis Sanchez ayaa ku soo bilowdaykulankii isreebreebka 2-0 ay kaga badiyeen xulka Brazil, laakiin waxa xigay afar guuldaro lixdii kulan ee ugu danbeysay,waxa ayna u ahayd guuldaro xanuun badan.
Brazil ayaa ka aargoosatay kulankii ugu dambeeyay oo ay 3-0 ku badisay, waxaana ay dhaliyeen dhamaan goolasha qeybtii labaad. Guuldaradii weyneyd ee Chile soo gaarto ,waxa ay fursad weyn u noqotay Peru oo heshay booska kala baxa ah,ayadoo la ciyaareeso New Zealand.
Chile ayaa ku jirta kaalinta 4aad ee qiimeynta billaha ah ee FIFA tan illaa iyo Julaay sannadkan. Waxay ciyaarayeen finalkii Confederations Cup bilowgii July, 1-0 ka qaaday xulka Germany. Hase yeeshee, waxay noqotay markii ugu horeysay ee ay isbedelaan, haatanna kaalinta 9aad ayee ku jirtaa qiimeyntabillaha ah ee FIFAdhamaan wadamada aduunkaChile ayaa noqon doonta xulkii ugu sareeyay ee caalamka ah ee seegaya Koobka Adduunka marka loo eego wadamada kale halka ay kaga jiraan qiimeenta billaha ah ee FIFA.
Waxaa jira laba waddan oo waaweyn oo ku yaala gobolka CONCACAF oo seegaaaya koobka aduunka waana – Mexico iyo USA. Labadaxull waxay bilaabeen inay si wadajir ah u ciyaaraan Koobka Adduunka tan iyo 1994tii. Caadi ahaan, ka hor inta aan la bilaabin tartanka,ayeey labo ka mid ah boosaska gobolka ee tartanka kama dambeysta ah heleen . Laakiin US MNT (xulka Mareykanka ee kubada cagta ayaa seegaya waqtigan koobka aduunka 2018.
USA waxay ku guuleysatay CONCACAF Gold Cup 6-jeer , waxeyna ku garaacday Finalka Jamaica 2-1 ciyaar ku dhamaatay , balse waxay ku guuldareysteen in ay ku soo baxaan qaab ciyaareedkooda isreebreebka Koobka Adduunka. , marxaladda ugu dambeysa ee a CONCACAF waxay ku lug leedahay lix ka mid ah guulo waa weyn kuwa ugu wanaagsan wadamada Gobolka.
USMNT waxay bilowday marxaladda kama dambaysta ah ee naxdinta leh ee lumisay Mexico iyo Costa Rica. Kuwani waxay ahaayeen labada ciyaarood ee ugu dambeeyay eetababare Jurgen Klinsmann. Bruce Arena, oo hogaaminayay wareega quarter-finalka Koobka Adduunka 2002dii, ayaa dib loo soo celiyay waxaana soo laabashadiisa labaad uu bilaabay si fiican, laakiin dhamaadkii ayaa ahaa mid naxdin leh oo aana u wanaagsaneen.
Arena ayaa ku bilaabatay 14 kulan oo aan laga badinin, taas oo ah tii ugu wanaagsanayd ee abid ugu fiicneyd macalinka kooxda USMNT. Si kastaba ha ahaatee, ka dib guushii Gold Cup, Mareykanka ayaa badiyay kaliya hal jeer afartii isreebreebreebka ee ugu danbeysay ee ay ku dhameystaan kaalinta labaad ee group-ka, taasoo ka fog TOP 3 oou sahlayso in ay toos u aadaanRuushka.
Maraykanku in uu koob aduun seego ,waxaa ugu danbeesay 1986-dii Waxay weli yihiin kuwa ugu awooda leh gobolka, laakiin casharraddaan oo kale ,waxa ay ka baran doonaa wax badan ,sidaas darteet Mareekanka,waxa ay u baahanyihiin in ay is badal sameeyaan.